Thu, Jul 2, 2020 at 8:35pm
बेइजिङ, ३ भदौ चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा हङकङ समस्याबारे आएका भनाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न क्यानडासँग आग्रह गरेको छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ श्वाङले मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा क्यानाडाले हङकङ मामिलाबारे छलफल गर्ने ‘अधिकार र योग्यता’ नभएको बताउँदै चीनले क्यानाडासँग हङकङ समस्यामा सतर्क भएर बोल्न वा गतिविधि गर्न कडाइका साथ आग्रह गरेको बताउनुभएको छ । प्रवक्ता कङ..
चाडमा अन्तरजातीय हिंसा : सरकारद्वारा सङ्कटकाल घोषणा
चाड, १ भदौ चाडका राष्ट्रपति इद्रिस डेबीले देशको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका दुई प्रदेशमा सङकटकालको घोषणा गर्नुभएको छ । अन्तरजातीय भिडन्त भएर हिंसात्मक घटना थप बढ्दै जाने भएपछि आइतबार उहाँले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको हो । अहिले सङ्कटकाल घोषणा गरिएको क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा परी यही महिनाको झण्डै दश दिनमा चार दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सङ्कटकाल तीन महिनाका लागि हो ।..
कश्मीर मुद्दाबारे इमरान खान र ट्रम्पबीच टेलिफोनमा कुराकानी
काठमाडौँ, ३२ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दामाथि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दामाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग यस भन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा शुक्रबार भारत प्रशासित कश्मीरबाट संविधानको धारा ३७० हटाएको विषयमा छलफल भएको थियो । यो बैठक पाकिस्तानले गरेको पत्राचारपछि बसेको थियो । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले भनेका..
दार एस सलाम, ३१ साउन । तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले आफ्नो मुलुकमा लगानी भित्र्याउनेतर्फ सहयोग गर्न दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग आग्रह गर्नुभएको छ । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति रामाफोसा हाल तान्जानियाको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति मागुफुलीले दक्षिण अफ्रिकासँग आर्थिक सहयोगका विविध क्षेत्रमा मिलेर सहकार्य गर्न आफ्नो मुलुक तयार रहेको पनि बताउनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दक्षिण अफ्रिकी..
केरलाको बाढीमा परी १ सय ४ को मृत्यु , ३६ बेपत्ता
केरला, भारत, ३० साउन भारतको केरला राज्यमा आएको मनसुनी बर्षापछि देखापरेको बाढी, डुबान र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बिहीबार दिउसोसम्म १०४ पुगेको छ । राज्यको प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार बाढीका कारण अरु ३६ जना अझै हराइरहेका छन् भने ३६ जना घाइते अवस्थामा छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले यो विवरण यही अगस्ट ८ देखि अगस्ट १५ (बिहीबार) दिउसो तीन बजेसम्मको भएको बताएका छन्..
रुसी विमान अकस्मात मकैबारीमा अवतरण, जोगीयो २२३ यात्रुको ज्यान
मस्को, ३० साउन । रुसी राजधानी मस्को नजिकको एक विमानस्थलबाट बिहीबार उडेको यात्रुबाहक विमान मकै बारीमा आकस्मिक अवतरण गरेको छ । यात्रु र चालक दलका सदस्य गरी दुई सय ३० भन्दा बढी व्यक्ति बोकेर उडेको जहाजमा उडेको एकैछिनमा चरा ठोकिन पुगेको थियो । चरा ठोकिएपछि असन्तुलित बनेको जहाजलाई चालकले मकैबारीमा सुरक्षित अवतरण गराएका थिए । सो विमान मस्को शहरको झुकोप्स्की विमास्थलबाट बिहीबार बिहान..
अत्यधिक गर्मीले जापानमा २३ जनाको मृत्यु, १३ हजार बिरामी
टोकियो, ३० साउन। जापानमा अत्यधिक गर्मीका कारण २३ जनाको मृत्यु भएको छ। १३ हजार जति बिरामी भएको अग्नि तथा प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यो संख्या ५ अगस्टयताको हो। प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार प्रचण्ड गर्मीका कारण १३ हजार जना बिरामी भएका छन्।अस्पतालमा गर्मीजन्य रोगको उपचार गराउन भीड लागेको छ। अपस्ताल पुगेकाहरुमध्ये चार सय जना भर्ना भएका छन्। गर्मीले सबैभन्दा बढी राजधानी टोकियोवासी..
नयाँ दिल्ली, २९ साउन । विदेश हिँडेका जम्मु कस्मिर जनसंघर्ष समितिका अध्यक्ष शाह फैसल दिल्ली एयरपोर्टबाट पक्राउ परेका छन् । पूर्व आईएस अधिकारी एवं जम्मु कस्मिर जनसंघर्ष समितिका अध्यक्ष शाह फैसललाई प्रहरीले दिल्ली एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको हाे । प्रहरीले बुधबार फैसललाई एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएपछि उनलाई जम्मु–कास्मिर पठाइएको छ। अहिले उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनी कुन देश हिँडेका थिए भन्ने..
प्रधानमन्त्री खान पाकिस्तानी काश्मिर भ्रमणमा, नयाँ नीति घोषणा गर्ने संकेत !
इस्लामाबाद, २९ साउन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुधबार पाकिस्तानी काश्मिरको भ्रमण गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री खानले काश्मिर भ्रमण पश्चात नयाँ नीति घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको छ । भारत सरकारले भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको विशेष मान्यता खारेज गरेसँगै आणविक शक्तिसम्पन्न दुबै मुलुकबीच तनाबको स्थिति छ । पाकिस्तानले भारतको यस कदमका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानले भारतीय कदमका सम्बन्धमा आपतकालीन..
आप्रवासीमाथि कठोर बन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौँ, २९ साउन । अमेरिका बसाई लम्ब्याउन र स्थायी बसोबास (ग्रिन कार्ड) गर्न चाहनेमाथि अमेरिकी सरकारले कठिन नीति ल्याउने भएको छ। आप्रवासी कामदारलाई लक्षित गर्दै सो मुलुकले यस्तो कदम चाल्ने तयारी गरेको हो। एक वर्षयता खाद्यन्न र सार्वजनिक आवास लगायतमा सरकारी सहुलियत लिएकालाई लक्षित गर्दै यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरिएको हो। सरकारी सुविधामा निर्भर हुन नदिन र सार्वजनिक सुविधामा आफैँ निर्भर हुन..
बेइजिङ, २८ साउन । चीनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) विगत सात महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष जनवरीदेखि जुलाई महिनाको अवधिमा ५३३ अर्ब युआन (चिनिया मुद्रा) अर्थात् करिब ७९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भएको छ । जुलाईमा मात्र अघिल्लो वर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा ८.७ प्रतिशत वृद्धि भई करिब ५५ अर्ब युआन..
अमेरिका-अफगान सरकार मौन, तालिबान भन्छ- अमेरिकासँग वार्ता सकारात्मक
दाेहा, २७ साउन । संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीचको वार्ता सम्पन्न भएको छ। आइतबार राति यी दुई पक्षबीचको आठौँ चरणको वार्ता भएको थियो। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद्दीनले कतारको राजधानी दोहामा भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए। वार्तामा भएका प्रगतिबारे आ–आफ्ना नेताहरुलाई जानकारी गराउने र आगामी प्रक्रियाका लागि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा थप स्पष्ट गरिने सहमति भएको पनि प्रवक्ता मुजाहिद्दीनलाई उद्धृत..
हङकङ विमानस्थलमा प्रदर्शन : सोमबारका सबै उडान स्थगित
काठमाडौँ, २७ साउन सोमबार हङकङ विमानस्थलबाट हुने सबै उडान स्थगित गरिएका छन् । प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले विमानस्थलको मुख्य टर्मिनलमै आन्दोलन गर्न थालेपछि सबै उडान बन्द गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थलको आगमन कक्षमा हजारौँको संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएपछि हङकङ विमानस्थलमा आउने र जाने सबै उडान स्थगित गरिएको हो । हङकङ विमानस्थल संसारकै व्यस्त विमानस्थलहरुमध्यको एक हो । गएको जुनदेखि हङकङमा नयाँ सुपुर्दगी..
पेट्रोल बोकेको ट्यांकर विस्फोटमा ६० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
काठमाडौँ, २६ साउन । पेट्रोल बोकेको ट्यांकरमा आगलागी हुँदा तान्जानियामा शनिबार कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ। देशको मोरोगोरो क्षेत्रमा पेट्रोल बोकेको ट्यांकरबाट चुहिएको तेल स्थानीय बासिन्दाले थापिरहेका बेला आगलागी भएर विस्फोट हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पेट्रोल बोकेको ट्यांकर पल्टिएर विस्फोटन भएको थियो। ट्यांकरबाट चुहिरहेको पेट्रोल स्थानीय बासिन्दाले थापिरहेका थिए। घटनास्थल राजधानी दार ए सलामदेखि २ सय किलोमिटर टाढा पर्दछ। प्रहरीका..
वासिङ्टन, २५ साउन हालै गरिएका क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई लिएर उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जङअनले सामान्य क्षमायाचना गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार बताउनुभएको छ । किमले अमेरिका–दक्षिण कोरियाली सैन्य अभ्यासको अन्त्यसँगै आणविक निशस्त्रीकरणका लागि अमेरिकासँग वार्ता शुरूगर्ने बताएका पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले बताउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार ट्वीटरमार्फत सम्प्रेषित सन्देशमा किमले आफूलाई एक पत्रमार्फत् क्षेप्यास्त्र परीक्षणबारे उक्त अभिव्यक्ति दिएको जनाइएको हो ।..
चीनमा आएकाे शक्तिशाली आँधीबाट १३ जनाको मृत्यु, १६ वेपत्ता
बेइजिङ, २५ साउन । शनिबार बिहान चीनको पूर्वी क्षेत्रमा शक्तिशाली आँधी आएकाे छ । उक्त आँधीबाट कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा आएको लेकिमा नामक तुफानबाट १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अरु १६ जना भन्दा धेरै वेपत्ता भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। आँधीसँगै वर्षा पनि भएको थियो भने आँधीका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। अधिकारीहरुले हजारौं रुख ढलेको र दश लाखभन्दा बढी स्थानीय..
काठमाडौँ, २४ साउन काठमाडौं । भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर भदौ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बुझिएको छ । भारतमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर दुइ देशको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुने थाहा भएको छ । भदौ ३ गते काठमाडौं आउने जयशंकरले काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिनेछन् । यो आयोगलाई..
अन्तिम श्वास बाँकी रहेसम्म कश्मीरका लागि लड्छाैं : इमरान खान
इस्लामावाद, २४ साउन । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अन्तिम श्वास बाँकी रहेसम्म कश्मीरका लागि लड्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री खानले भारतीय प्रशासनमा रहेको कश्मीरी भूमिमा भारतले जातीय नरसंहार गरिरहेको समेत आरोप लगाए । पाकिस्तानको संसदमा बोल्दै उनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई हिटलरको नेतृत्वमा रहेको नाजी जर्मनीसँग तुलना समेत गरे । उनले भने ‘यो केही गर्नैपर्ने समय हो ।’ सम्बोधनका क्रममा उनले पाकिस्तान कश्मीरका लागि अन्तिम..
कश्मीरबाट ५ सय ६० जना पक्राउ, इन्टरनेट र फोन बन्द
कश्मीर, २३ साउन । भारत प्रशासित कश्मीरमा विभिन्न क्षेत्रका ५ सय ६० जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरि श्रीनगर, बारामुल्ला र गुरेजलगायत क्षेत्रमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ। जम्मू कश्मीरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मीसमेत गरि ५ सय ६० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएका छन्। गत सोमबार भारत सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेष..
एजेन्सी । राष्ट्रसङ्घले साइबर आक्रमण गरेर उत्तर कोरियाले २ अर्ब डलर चोरेको आरोप लगाएकाे छ । एउटा गोप्य राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले उच्चस्तरका साइबर आक्रमणहरू गर्दै आफ्ना हातहतियार परियोजनाका लागि झन्डै दुई अर्ब डलर अवैध रूपमा जुटाएको आरोप लगाएको बताएकाे हाे । बीबीसीका अनुसार विज्ञहरूको एउटा समूहले वित्तीय संस्था तथा क्रिप्टोकरेन्सी भनिने डिजिटल मुद्रा सटही गर्नेहरूसँग कम्तीमा ३५ वटा साइबर आक्रमणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। ती विज्ञहरूका..
ट्रम्पले दिए भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश
काठमाडाैं, २१ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न ट्रम्पले सोमबार आदेश दिएका हुन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको कार्यशैलीको विपक्षमा रहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला सरकारसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । विगत ३० वर्षको अन्तरालमा अमेरिकी महादेशभित्र अमेरिकाले गरेको यस किसिमको यो..
पुटिनद्वारा अमेरिकासँग हतियार व्यवस्थापनका लागि नयाँ वार्ताको प्रस्ताव
मस्को, २० साउन रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियारबाट आउनसक्ने ‘अस्तव्यस्तता’लाई मध्यनजर गर्दै सोमबार अमेरिकासँग नयाँ वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । शीतयुद्धकालीन समयमा अमेरिका र तत्कालिन सोभियत सङ्घबीच मध्यम दुरीका आणविक शक्ति सम्झौताबाट अमेरिका र रूस फिर्ता भएसँगै सम्झौता अन्त्य भएको परिप्रेक्षमा पुटिनको उक्त प्रस्ताव आएको हो । “नियम, सीमा र कानून बिहीन अवस्थाको अस्तव्यस्तताबाट जोगिनका लागि सम्भावित सवै परिणामलाई तौलिँदै निःसन्देह..
१ महिनामै तेस्रो विदेशी तेल ट्याङ्कर इरानी कब्जामा
तेहरान, १९ साउन इरानले खाडी क्षेत्रबाट फेरि एउटा विदेशी तेल ट्याङ्कर आफ्नो कब्जामा लिएको इरानी समाचारसंस्थाहरूले जनाएका छन् । इरानी राज्य सञ्चालित टेलिभिजनले दिएको जानकारी अनुसार रेभुल्यूशनरी गार्ड कोरको जलसेनाले अरब मुलुकबाट इन्धन तस्करी गरिरहेको एउटा विदेशी ट्याङ्कर पर्सियाली खाडी क्षेत्रबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । प्राप्त विवरणहरूमा सो ट्याङ्करमा सात लाख लिटर इन्धन भएको बुझिएको छ । ट्याङ्करसहित यसका चालक दलका सात..
अमेरिकाको ओहायोमा फेरि गोली चल्यो, ९ जनाको मृत्यु
वासिङ्टन, १९ साउन । अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित डेटनमा आइतबार बिहानीपख भएको गोलीकान्डमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गोली चलाउने व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएको छ । गोलीकान्डमा अरु १६ जना घाइते भएका र उनीहरुलाई स्थानीय अस्पतालहरुमा भर्ना गरिएको छ । यस घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । अमेरिकाको टेक्सासमा शनिबार भएको अर्को गोलीकान्डमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको..
अमेरिकाको टेक्सस् गोली काण्डमा २० को मृत्यु
काठमाडौँ, १९ साउन । अमेरिकाको टेक्ससस्थित एक व्यापारिक केन्द्रमा भएको गोली काण्डमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य २६ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । दिउँसो धेरै मानिस बजारका लागि निस्कने समयमा व्यापारिक केन्द्रमा गोली काण्ड भएको हो । गोली काण्डमा प्रहरीले डलासको काँठ क्षेत्र भनिने एलिनका बासिन्दा २१ वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ । गोली प्रहार शुरु भएको केही मिनेटमा..
एसियामा क्षेप्यास्त्र राख्दै अमेरिका, यस्तो पो रहेछ रहस्य
काठमाडौँ, १९ साउन । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले एसियामा मध्यम दूरीका मार हान्ने क्षेप्यास्त्र छिट्टै तैनाथ गर्न चाहेको बताएका छन्। चिनियाँ र उत्तर कोरियाली दबदबा घटाउन यस्तो कदम चाल्नुपरेको अमेरिकी भनाइ छ। रक्षामन्त्री एस्परले एसियामा पारम्परिक हतियार हटाएर मध्यम स्तरमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्न सहज भएको पनि खुलासा गरे। अमेरिका ‘इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्सेस’ (आईएनएफ) सन्धिबाट बाहिरिसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे।..
वासिङ्टन, १८ साउन अमेरिकाकी पूर्व प्रथम महिला मिचेल ओबामाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने संभावना शुन्य रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले उम्मेदवारी दिने चर्चा चलिरहेका बेला आफू त्यस प्रतिश्पर्धामा नरहेको शुक्रबार स्पष्ट पार्नु भएको हो । मिचेलले देशको सेवा गर्नका लागि अन्य धेरै बाटोहरु रहेकाले राष्ट्रपति नै बन्नु पर्ने चाहना नभएको बताउनु भयो । “त्यस विषयमा मेरो शुन्य संभावना रहेको..
बैंककमा आसियान बैठक जारी, शहरमा शृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोट
बैंकक, १७ साउन दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को मन्त्री स्तरीय बैठक जारी रहेकै बखत थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा शुक्रबार शृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोट भएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ समेत सहभागी यस बैठकमा आसियानका सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरु सहभागी हुनुहुन्छ । कम क्षमताका पछिल्ला बिस्फोटहरुबाट तीन जना घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । राजनीतिक हिंसाको इतिहासबाट चर्चामा रहेको थाइल्यान्डमा गत मार्चमा सम्पन्न विवादास्पद आम..
वासिङ्टन, १७ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने थप ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत करवृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । चीनसँगको व्यापार वार्तामा चीनले अलमल गरिरहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सेप्टेम्बर १ तारिखदेखि लागू हुनेगरी करवृद्धिको घोषणा गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनले तत्काल कुनै कदम नचाले १० प्रतिशत करवृद्धिलाई अझ बढाउने चेतावनी पनि दिनुभएको..
Results 1601: You are at page 17 of 54